आइसोलेसन चिन्तन- विचार - कान्तिपुर समाचार
सरकारी अस्पताल सामान्य संक्रमितको पहुँचबाहिर पुगिसक्यो । निजी अस्पतालको खर्च जोकोहीले धान्नै सक्दैन ।
मंसिर ७, २०७७ साङमो योन्जन तामाङ
मोबाइलमा रिङटोन बज्यो । रातको एक बजेको रहेछ । अलिअलि तनावमै निदाएकाले होला, रिङटोन बजेको निद्रामै थाहा भयो । उठेर मोबाइल हेरें । अपेक्षित ठाउँबाटै एसएमएस आएको रहेछ । लेखिएको थियो– पीसीआर पोजेटिभ । यो नतिजाका लागि केही हदसम्म मानसिक रूपमा तयार हुँदै थिएँ, तर रिपोर्ट अन्धकार, सुनसान अनि म एक्लै भएको रातमा आइदियो ।
यसले तनावलाई झन् बढायो । आत्मबल उँचो राख्नुपर्ने हेक्का भएकी म यो क्षण डराएँ । परिवारका सदस्यहरू निद्रामा थिए । बताउन उचित लागेन । क्यालिफोर्नियामा रहेका ठूलो दाइलाई भिडियो कल गरें । दस महिनादेखि ‘स्टे एट होम’ आदेश पालन गरिरहेका र संक्रमितमा हुने जटिल अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेका उनी स्तब्ध भए । यसो हुनुमा हामी सबैको एउटै ‘कन्सर्न’ मेरो गर्भावस्था थियो । अनि मुटु रोगी आमा र बुबा । उहाँहरूमा पनि संक्रमण देखिए स्थिति कस्तो होला भन्ने चिन्ताले हामीलाई थप सतायो । दाइले भोलिपल्ट बिहान मात्र आमा, बुबा र सानो दाइलाई जानकारी दिने बताए । त्यो रात भिडियो कलमै बिताएँ । मन जो भुलाउनु थियो ।
भोलिपल्ट सबै कुरा सामान्य रह्यो । मेरा परिवारका सदस्यहरूले संक्रमणलाई सामान्य तवरले नै लिए र सामान्य रूपमै लिनुपर्ने आत्मविश्वास दिए । त्यसपछि, मलाई होम आइसोलेसनका लागि कौसीको कोठामा व्यवस्थापन गरियो, जुन हामी सबैका लागि सुरक्षित ठाउँ थियो । मेरो कोठालाई भने पूर्ण रूपमा डिसइन्फेक्ट गरियो । पीसीआर गर्नु दुई दिनअघिदेखि म भान्सामा खाना पाकिसकेको पत्तो पाउँदिनथें । खुर्सानी खानुअघि पिरोको मात्रा थाहा पाउन सुँघ्ने बानी छ मेरो । एक बेलुकी खाना खाने बेला अकबरे खुर्सानीलाई त्यसै गरें । पिरो राग रहेनछ भन्दै खाइनँ । सबैमा पिरो नहुनु पनि स्वाभाविक नै ठानें । भोलिपल्ट साँझ, छिमेकी बहिनी खुट्टामा चोट लागेकाले डेटोल लगाउन आइन् । त्यति बेला मात्र झट्ट याद भयो, डेटोलको गन्ध मलाई किन छैन ? नाकमै लगेर सुँघें । अलिकति पनि गन्ध आएन । त्यत्ति बेलै मैले अनुमान लगाएँ, यो कोरोनाको लक्षण नै हुनुपर्छ । हत्त न पत्त गुगल गरें, लेखहरू पढें । अनि पत्ता लाग्यो– गन्ध हराउनु एउटा ‘कमन सिम्टम’ हो । रुघाखोकी र ज्वरो नभएकाले सामान्य अवस्थामै छु भन्ने लाग्यो तर पनि निश्चित हुन सकिनँ । केही दिनअघि हल्का रुघा लागेको थियो ।
त्यतिखेर नाक बन्द भएकाले गन्ध नआएको होला भन्ठानेर अर्को दिन पनि डेटोल सुँघ्दै बसें । घरभित्र दैनिक प्रयोगमा रहने साबुन, स्यानिटाइजर, कुनै वास्नादार चीज होस् वा भान्साका परिकार– यी सबको गन्धले मलाई एक झोक्कामै बिरामी बनाइदिन्थ्यो । तर, त्यस दिन म त्यही गन्ध पाउन तल्लीन थिएँ । तैपनि प्रगति भएन । यति बेलासम्म मैले आफूलाई पूर्ण रूपमा आइसोलेट गरिसकेकी थिएँ ।
समाज र कोरोना
होम आइसोलेसनमा बस्नेबित्तिकै परिवारका सदस्यहरूले म बसेको स्थानमा आउजाउ गर्दा र बोल्दा मास्क लगाउन थाले । घरमै मास्क लगाएको देखेर एक छिमेकीलाई चासो भइहाल्यो । रूखो शैलीमा छिमेकीले आमालाई सोधे, ‘तपाईंलाई कोरोना लाग्यो कि क्या हो, किन मास्क लगाउनुभएको ?’ संक्रमितले मात्र नभई संक्रमणबाट बच्न पनि मास्क अनिवार्य छ भन्ने बुझाइ जनमानसमा छैन भन्ने महसुस छिमेकीको त्यो प्रश्नले गरायो । संक्रमित भएपछि छिमेकीलाई बताउनु आफ्नो दायित्व हो भन्ठानेर सबैलाई जानकारी गरायौं । प्रश्न सोध्ने छिमेकी भने त्यस दिनदेखि कौसीमै निस्केनन् ।
आइसोलेसनमा बसेसँगै चिने–जानेकाहरूले सान्त्वना दिए– धेरै संक्रमितलाई लक्षण देखिएको छ र निको पनि भइहाल्छ । उनीहरूले कोरोना उपचारविधिका अनेक थरी सुझाव, जडीबुटी र घरायसी औषधि सुझाए । सबै जना कोरोनाविज्ञ भएका रहेछन् । मानौं स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह जरुरी नै छैन । शारीरिक अवस्थाअनुसार चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र यस्ता चीजको सेवन गर्नुपर्ने नत्र झन् जटिल समस्या निम्तिन सक्छ भन्ने चेतना नभएको देख्दा म दुःखी भएँ । चाहे लौकाको जुस होस् वा जमराको वा गुर्जोको, पूर्ण वैज्ञानिक ज्ञानबिना लहलहैको पछि लाग्ने बानी मेरो छैन । आइसोलेसनमै बस्दा मैले संक्रमितले ध्यान दिनुपर्ने विषयबारे चिकित्सकसँग परामर्श लिएँ । चिकित्सकले तातो पानी पिउन, सुप र पोषणयुक्त आहार लिन अनि गाह्रो भए अस्पताल जान सुझाएका थिए । कडा संक्रमण नदेखिएकाले केही हुँदैन भन्ने लाग्यो । तैपनि विश्वमै यससम्बन्धी विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको अनि ठोस तथ्य बाहिर नआइसकेकाले म ढुक्क हुन सकिनँ ।
अहिले समाजमा एक थरी समूह यस्तो छ, जसले कोरोना संक्रमणलाई आफ्नै हिसाबले सामना गरिरहेको छ । उनीहरू परीक्षण नगरी कोरोनालाई पचाएको अडकलबाजी गर्छन् । चिनजानकी एक महिलाले कोरानासँग मिल्ने लगभग सबै लक्षण भएको तर आइसोलेसनमा नबसेरै निको भएको कथा सुनाइन् । पीसीआर टेस्ट नभएकाले उनको यो कुरा पत्याउने कि नपत्याउने, अलमलमा परें । उनी नियमितजसो हाम्रो ढोकासम्म आउँथिन् । कतै उनीबाटै घरमा संक्रमण त भित्रिएन ? म झस्किएँ ।
उनी लगायतले लक्षण देखिए पनि पीसीआर नगर्नुका केही व्यावहारिक कारण छन् । पीसीआरका लागि निजी अस्पतालले ३ हजार रुपैयाँ लिन्छन् । स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार संक्रमितले चौधौं दिनमा अर्को टेस्ट गर्नुपर्छ । कम्तीमा दुईपटक पीसीआर गर्नुपर्ने खर्चले सामान्य लक्षणसहितको बिरामीको खुराक पुग्ने गर्छ । यस्तो सोच उनीजस्ता धेरैमा विकसित भइसकेको छ । परिवारमा एक जनाको नतिजा पोजेटिभ आए अन्य सदस्यले पनि टेस्ट गर्नुपर्छ । यसो गर्दा निम्नमध्यम वर्गका परिवारले यसको खर्च धान्न सक्दैनन् । पीसीआर शुल्क सुलभ भइदिए उनीजस्तै कैयौं शंकास्पद संक्रमित निस्फिक्री हिँडडुल गर्थेनन् । साथै आइसोलेसनको उचित व्यवस्थापन भइदिए समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिने जोखिम कम हुन्थ्यो ।
सरकार र समस्या
म संक्रमित हुँदा, नेपालमा १ लाख व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसले भेटिसकेको थियो । सत्तासँग नजिक भएकाहरूलाई पनि यसले भेट्यो । स्वास्थ्यको हर सुरक्षित उपाय अपनाउँदा–अपनाउँदै पनि उनीहरू संक्रमित हुन्छन् भने यस्ता उपाय अपनाउन असमर्थ श्रमिक र असहाय वर्ग कति जोखिममा होलान् ? सूर्यबहादुर तामाङजस्ता मजदुरलाई पनि सम्झें, जो कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको अव्यवस्थित लकडाउनको सिकार हुन पुगेका थिए । कामको खोजीमा भौंतारिएका बेला नाम्लो हातमा भएको अवस्थामै काठमाडौंमा उनको प्राण गयो । उनीजस्ता कैयौं भोका र गरिबहरूको मृत्युको लेखाजोखा हुँदैन । सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि उचित व्यवस्था गर्न तत्परता देखाएको भए प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने संवैधानिक हकसमेत कुण्ठित हुँदैनथ्यो ।
यस्ता कुराले मलाई निकै चिन्तित बनाइरह्यो । गर्भावस्थामा कोरोनाले थपिदिएको थकानले मलाई रातदिन ओछ्यानमै पल्टाइराख्यो । बाहिर अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरको अभाव छ भन्ने यथार्थले झन् डर थपियो । यसैबीच कोरोना संक्रमितले औषधि–उपचार खर्च आफैंले बेहोर्नुपर्ने सरकारी निर्णय सार्वजनिक भयो । त्यसलगत्तै काठमाडौंमा कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट हातमा लिई सडकमै रुमलिरहेका सोमबहादुर लामाको समाचार बाहिर आयो । अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्थाका उनी पैसा नहुँदा अलपत्र परेका थिए ।
सरकारी अस्पताल सामान्य संक्रमितको पहुँचबाहिर पुगिसक्यो । निजी अस्पतालको खर्च जोकोहीले धान्नै सक्दैन । पहुँच र पैसावालाले मात्र सेवा लिन सक्ने स्वास्थ्य प्रणाली हाम्रोमा बनिरहेको स्पष्टसँग देखिँदै छ । शान्ति, समृद्धि र समानता सरकार हाँक्नेहरूको बोलीमै सीमित भइरहेछ । बिहान–बेलुका छाक टार्न नसकेका मजदुरहरूलाई टुँडिखेलमा निःशुल्क खाना बाँडिरहेका परोपकारी संस्था र व्यक्तिलाई स्थानीय सरकारले रुचाएन । संक्रमित हुँदा तनावमुक्त हुनुपर्थ्यो तर देशको यस्तो परिस्थिति र राजनीतिक घटनाक्रमले दिक्क बनाइरह्यो । सोह्रौं दिन पीसीआर गर्दा मसहित परिवारका सबै सदस्यको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । लामो समयदेखि घरबाहिर ननिस्के पनि परिवारमा म मात्रै संक्रमित हुन पुगेकाले सकेसम्म सावधानी अपनाउने प्रयत्नमा छु । कोरोना महामारी नियन्त्रण र यसको उपचारमा देखा परेको निराशाजनक परिस्थितिप्रति सचेत हुँदै आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नुपर्ने बाहेकको विकल्प म देख्दिनँ ।